Tsy afa-manoatra intsony… : nofoanana aloha ny sehon’i Lalatiana | NewsMada
Tsy afa-manoatra intsony… : nofoanana aloha ny sehon’i Lalatiana
Tokony nandeha ny 8 oktobra lasa teo ny fampisehoan’i Lalatiana, tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Noho ny baiko nidina avy amin’ny fitondram-panjakana, amin’ny tsy tokony hisian’ny fivorivoriana anefa, voatery nanapa-kevitra ny avy ao amin’ny mi’Ritsoka Production, mpikarakara, fa hahemotra amin’ny fotoana mahamety azy ny seho.
Samy niandry ny daty hahafahan’ny lapan’ny Fanatanjahantena misokatra ho an’ny fampisehoana ny mpikarakara, ireo mpanakanto fa indrindra ny mpankafy. Nihantona teo foana anefa izany, noho ny toe-draharaha mahakasika ny pesta, izay tsy mbola mihatsara hatramin’izao.
“Nampanantena izahay fa raha vao miverina amin’ny laoniny, ka tsy misy hatahorana intsony dia hatao ny fampisehoana. Noho ny tranga misy anefa, voatery ny mi’Ritsoka Production sy i Lalatiana manafoana tanteraka ny fampisehoana, ka manome fotoana ireo mpankafy amin’ny manaraka indray”, hoy ny fanambarana tonga taty amin’ny fanoratana.
Araka izany, nofoanana mihitsy aloha ilay seho. “Tsy sitraky ny mpanakanto, ny mpikarakra fa indrindra ianareo mpankafy izany. Noho izany indrindra, hisy ny famerenana ny volan’ireo efa nividy tapakila mialoha, tao amin’ny Super Music Analakely”, hoy hatrany ny fanambarana. Araka ny fandaminana, afaka mandalo manomboka ny alatsinainy 23 oktobra ka hatramin’ny asabotsy 28 oktobra ireo hanao ny famerenana ny tapakila.
“Tsy maintsy misy ny fiarahana, fa aleo mihitsy milamina ny toe-draharaha mba anatin’ny fo sy saina tony ary vatana salama no hiatrehantsika izany. Mampanantena izahay fa hisy io, ary mety tsy ho ela akory”, hoy kosa ny fanampim-panazavana avy amin’ny mi’Ritsoka Production.
Tsy ny mpikarakara hetsika irery no iharan’ny fatiantoka iray lavaka amin’ny tranga toa izao, fa ny mpanakanto ihany koa. Tsiahivina fa ankoatra ity seho goavana ity, tokony nandray anjara tamin’ny “Madajazzcar”, ny “Nosy Be Jazz Festival” ary ireo seho anaty efitrano maromaro toa ilay nokasaina hatao any Antsirabe ny 5 novambra izao i Lalatiana. Foana avokoa anefa izany…